China abakhiqizi bebhokisi lephepha nabaphakeli | Hongning
Into Ibhokisi lephepha le-Kraft elishibhile futhi eliqinile ibhokisi elihlukile ngosayizi ohlukile imibala ehlukile ngokwezifiso Ilogo elishisayo ibhokisi lephepha lokudla okusheshayo
Umbala Umbala wephepha we-Kraft Umbala wangokwezifiso
Usayizi Kraft iphepha
Isitayela Ukuvikelwa kwemvelo
I-oda yangokwezifiso Ngokuya ngemfuneko yesampula yekhasimende
I-NOQ Cela inkambiso
Umbala Ibhokisi lephepha lokuvikela imvelo
Usayizi Ibhokisi lephepha lokudla okusheshayo, ibhokisi lelayisi
Isitayela Alahlwayo iphepha ibhokisi
Umumo Usayizi ojwayelekile: 1,000 usayizi owenziwe ngezifiso: 10,000
Inqubo yokukhiqizwa kwebhokisi lephepha.
Okokuqala: iphepha lokulungisa iphepha, le nqubo ifaka iphepha lokulungisa nomugqa wokucindezela. Ukulungisa iphepha kuhlukile ocindezelweni. Umshini wokuhlukanisa iphepha wamukelwa.
Sika amakhadibhodi ukwenza umphetho wephepha ubushelelezi futhi ucoceke. Ummese ohlukanisa iphepha kumele ubukhali, ngeke kube khona notch. Uma i-blade ingabukhali, khona-ke amakhadibhodi asikiwe anezinsalela zamaphepha, ukungcola, njll., Okungaholela kumikhiqizo ephrintiwe ayihlangabezani nezidingo. Ukucindezela kolayini kwenziwa ngokusebenzisa umshini wokusika umugqa.
Okwesibili: ukuphrinta kwamakhadibhodi. Ukuphrinta kwe-inki kunokuphrinta okukodwa. Kuwukuphrinta okulula ngokusebenzisa uhlobo lwentambo ukuthumela amakhadibhodi kuphrinta ngqo. Kukhona ezinye izinhlobo zokuphrinta, njengokuphrinta kabili. Ngenxa yomehluko wezinto zokusetshenziswa, ukumuncwa kwephepha kuhlukile. Okunye ukusebenza kokumuncwa kuphansi, izinga lokomisa uyinki lihamba kancane; Okunye ukusebenza kokumuncwa kuphansi, izinga lokomisa uyinki liyashesha.
Okwesithathu: ukukhala, usebenzisa umshini we-grooving kukhadibhodi ephrintiwe, umgomo oyisisekelo uyefana nomshini wokusika umugqa.
Okwesine: ibhokisi le-nail noma ibhokisi lokunamathisela lihlanganiswe nebhokisi, ngokuya ngamakhasimende adinga ukufaka i-nail box noma ibhokisi lokunamathisela. Uma udinga ukufaka i-nail box ukusebenzisa umshini webhokisi, ibhokisi unamathisela ukusetshenziswa komshini wokunamathisela ibhokisi.
Okwesihlanu: ibhokisi lokupakisha kwamakhathoni, ibhokisi linanyathiselwe, ukusatshalaliswa kohlaka lokuhambisa, ukupakisha nokubopha.
Owesithupha: ukugcinwa kwempahla, amabhokisi agcwele athunyelwe endlini yokugcina izimpahla.
Olandelayo: Inkomishi yephepha